China Gel ziso compress mask fekitori uye vagadziri | Huanyi
Zvinhu: PVC / EVA / TPU
OEM: glitter chimiro kana ruvara, logo yakadhindwa kana yekusonera chitaridzi, 3D katuni nzeve, dzakaputirwa jira zvadzo kudhinda, pasuru bhokisi kana bhegi, showcase kuratidza bhokisi.
gel ziso masiki rinobatsira nemusoro, migraines, sinusitis, hangovers, maziso ekuzvimba, maziso akaneta, mabhegi eziso uye kupwanya. Iyo zvakare inogona kushandiswa mushure mekuvhiyiwa kwemaziso. Kupisa uye kutonhora kurapwa zvese zvakanaka uye zvakachengeteka.
1. Makore gumi Chiitiko cheOEM, ODM, Yakasarudzika ruvara, logo, mapakeji. Unogona kukupa mazano ehunyanzvi, kubatsira kugadzira yakanaka mhinduro yeiyo gel runako uye zvigadzirwa zvekuchengetedza zvevanhu.
Pashure: gel ziso compress
Zvadaro: doro bhodhoro rinotonhorera
ruva chairo gel ziso chifukidzo
kurapa gel bead ziso mask